Indawo yokuBhaka yokuFakela lula ukuPheka
Indlela yokufaka umgubo wokubhaka kwi-Recipe
Ngaba wenza nawaphi na ukubhaka? Ukuba ufumanisa ukuba ube ne-baking soda kuphela kunye ne-recipe ebiza i-powder baking, okanye ngokulandelanayo, uyazi ngokwaneleyo malunga nokupheka kweekhemistri ukwenza indawo endaweni? Yonke into oyifunayo yinkomishi yokupheka ukugcina imini.
Ukusebenzisa iPowing Powder Xa iRipipe ibiza i-Baking Soda
Unokufaka indawo ye-baking powder endaweni ye-baking soda, nangona uya kufuna enye ipowder yokubhaka, kuba iqukethe izithako ezongezelelweyo.
Ukuba iresiphi idinga i-baking soda, sebenzisa ii-2-4 izihlandlo zokupheka ngaphezulu. Ngoko ke, ukuba iresiphi isebenzisa i-1/2 ye-teaspoon baking soda, sebenzisa ubuncinane i-1 powaspoon baking powder. Esinye isiphakamiso ukubuyisela umbane wamanzi kwi-recipe nge-non-acidic. Ngokomzekelo, ukuba wenza indawo kunye neresiphi yefowuni, uzakufumana iziphumo ezingcono xa utshintshe ubisi oluqhelekileyo.
Ukusebenzisa i-baking soda xa iRipipe ibiza ukukhupha i-powder
Awukwazi ukubeka ngokuthe ngqo indawo yokutya i-soda ukuba uphuma kwi-powder baking . Nangona kunjalo, unokwenza ipowder yakho yokubhaka, usebenzisa ezimbini iikhilimu ze-tartar kunye ne-part part baking soda . Ingakwazi ukufumana into ekhohlisayo ukufumana imilinganiselo eyiyo xa ufuna kuphela i-teaspoon ye-powder yokubhaka, ngoko oko ungathanda ukukwenza kudibanisa i-batch encane ye-powder baking yokwenza i-baking kwaye ulondoloze yonke into kamva (igcinwe kwisitya esitywinwe ukugcina umswakama kude). Hlanganisa ndawonye 1 i-teaspoon baking soda ne-2 teaspoon i-cream ye-tartar.
Emva koko fanisa umlinganiselo we "powder powder" oyifunayo kuloo mxube.
Olunye uhlobo kule recipe luxuba i-1/4 yeaspuni ye-baking soda, 1/4 ithispoon isitashi yegayi, kunye ne-1/2 ye-teaspoon cream ye-tartar. Oku kuvelisa i-teaspoon 1 ye-powder yokubhaka, eyenza njengowokupheka kabini okubhaka. Uya kufumana iziphumo ezilungileyo ngale ngu qulelo ukuba usebenzisa i-1 teaspoon ye-powder yokubhaka yokuzenzela yonke i-1 inkomishi yomgubo kwi-recipe.
Ukuba usebenzisa ipowder yokupheka, yenza isiqinisekiso sokubhaka iresiphi yakho kanye emva kokuxuba izithako. Kukho i- powders yokubhaka yokuthengisa eyokuvumela ukuba uvumele iresiphi ihlale ixesha elithile ngaphambi kokubhaka, kodwa ngokuqhelekileyo isicwangciso esihle sokuqala ukufudumeza ukutya ngokukhawuleza, kuba ukuphendula okubangela ukuba izinto ezibhakayo zivuke ziqala ngokukhawuleza njengoko izithako ezimanzi wongezwa.
Amanqaku malunga nokuBhekiswa kwamaBhaka
Ukuhambisa izitya ezigwele njenge-baking powder kunye ne-baking soda akuthethi kube nefuthe elikhulu kwi-flavour kuba ezi zithako zikhoyo kwixabiso elincinci. Nangona kunjalo, unokwazi ukubona i-flavour okanye ukuhluka kohlobo. Akuyi kuba "kubi". Enyanisweni, usenokufumana iresiphi entsha oyithandayo!
Iikhemikhali Ezenza Uve Uthando
Ngaba Kukulungele Ukutya Isikhumba Semi Mango?
Ziziphi Ixesha Elivuthayo?
Uqoqosho lwezithuba emva kweMfa: 1945-1960
Era yeemvakalelo ezilungileyo: Imbali yeli-19 leminyaka
I-Tufts GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Ukufunda amaMatriki amakhulu kunye ne-Sus4 Chords kwiGititar
Udla, amahlumela & amaqabunga: Kutheni, ii-Commas Ngokwenene Zenza Umehluko!